Lapho isikhala khulula efulethini kuthiwa, okuyinto ayifuna ngabomvu entula, okuthile ukuklama ukuhluzwa kuphela ungangeni, ukuze kuzuzwe induduzo esiphezulu ezimweni ezingavamile. Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, ekhishini. Lapha, noma kunjalo, kodwa ngaphandle isiqandisi, isitofu, ukucwila nje akakwazi ukukwenza. A ikhabethe ngaphezulu, ukusika ibhodi, plus Ngifuna unamathisele itafula evamile yokudlela. Egoqekayo okufushane odongeni-agibele amahhashi, kulokhu - kuyisinqumo okunengqondo. Nakuba akusiyo njengoba othandwayo ewufanele.
BaseYurophu Sekuyisikhathi eside benamandla umqondo design obusebenzayo. Kugucula ifenisha design akekho bamangale, ekhaya impahla njalo avumelane izifiso aphethe. Wena uze abangane ukuvakashela futhi bahlonipha isithombe enhle noma isithombe ubekwe odongeni ohlakeni elula kodwa nenhle. Bese kufika isikhathi ukuphuza itiye manje ngokunyakaza okukodwa iguqulwe masinyane ibe itafula. indlela amaseviyethi kuyinto unnoticeable ukuze Kwakungafanele ngisho uyayiqaphela injongo kweqiniso Vending yakho odongeni lokubhalela.
Ake sihlolisise at ucezu okunjalo kuwusizo ifenisha. Abasunguli balo, cishe liphefumulelwe ithebula ujantshi gumbi, ukujwayeza ke izidingo zansuku zonke. Ukuthengiswa ezakhiwe enjalo Kuphakathi standard noma isiko.
Uma ngabe ukhethe etafuleni ukusonga eseqedile, ikhishi okufushane odongeni-agibele amahhashi kufanele wenziwe impahla eqinile futhi ehlanzekile. Ngokuvamile, chipboard ihlangabezana nalezi zimfuneko nge enamathela laminated. Lokhu usule is ongakhubekanga umswakama high, ke akesabi pomyvok njalo usebenzisa amakhemikhali yasendlini. Futhi ngemva kokuqalaza nawo ku inkomishi yekhofi elishisayo, khona-ke cishe ukuthola umonakalo ongalungiseki. Ngaphezu kwalokho, laminate ubukeka ulingisa izinkuni. Nokho, ungakwazi oda yimuphi umbala, ukukhanya nge umbala ekhishini isikali wakho.
Ngokusekela isakhiwo izimangalo eziningana: it unesibopho ukuqina, ukuqina kanye nokwethenjelwa zedivayisi. Metal Racks ubambe iphaneli, ngaphandle kokuba usivumele ukushwiba, ngokulinganayo usabalalisa umthwalo. -chrome ekhazimulayo ukuletha touch eliyinkimbinkimbi nangobuciko ukuze itafula kunalokho angadle ngabuhle obutheni ebukeka. Egoqekayo indlela futhi akufanele inxushunxushu, ukusebenza kahle futhi ngaphandle kokuphazamiseka.
Esimweni lapho amamodeli ejwayelekile bengakwamukeli, ngoba noma ngabe yisiphi isizathu, umklamo ingaphakathi kungenziwa yayala ngezindinganiso ngabanye, xoxa umbala, hlobo, impahla into esizayo. Masters uzoqaphela iyiphi amehlo akho engqondo. Nakuba esinamandla, ungazama ngezandla zabo ukuze udale ithebula ukusonga, refitting sill ngaphansi endaweni ethokomele ukuba sizodla nabo. Kumnandi ukudla, ngifuna ngefasitela.
into ephelele futhi ufuna - ukwenza isivali, ulingana nobude sill. Khona-ke, the last unamathisele iluphu upiyano, okuyinto ukubeka usule. Ngu ubakaki iphaneli ifenisha kokuhlanganisayo yehhashi egibele, naye kamuva wakhonza njengombonisi ukwesekwa. Lapho eligoqiwe, iphaneli uba esibukweni zokuhlobisa, ukugqiba Ukushisa kurediyetha.
Egoqekayo ithebula kuyasiza hhayi kuphela ekhishini. Udinga indawo ukusebenza, kodwa ikamelo yangasese, ngisho esabe ukuphupha? Flip kanye ne-laptop - akuyona indlela yokuphuma? On emphemeni emincane worktop ensikeni uvumele enhle ukuhlala inkomishi yekhofi noma ingilazi yewayini.
Semibhede "Ascona Fortune": izibuyekezo zamakhasimende, izithombe
Indlela ukulungiselela amawolintshi nekharameli? Ungadliwa for gourmets
Charlz Ledbiter, izincwadi: ingokomoya, umlando, yesayensi